Fiarakodia nitrongy andrin-jiro… : tovovavy iray namoy ny ainy, roa hafa naratra | NewsMada
Fiarakodia nitrongy andrin-jiro… : tovovavy iray namoy ny ainy, roa hafa naratra
Nitrangana lozam-piarakodia namoizana ain’olona tao Antaimby Sambava, afakomaly alina. Fiarakodia iray no nifatratra tamin’ny andrin-jiron’ny Jirama. Tovovavy iray maty tsy tra-drano…
Tapaka mihitsy ilay andrin-jiro ka nianjera teo ambonin’ilay fiara nandehan’ireo niharam-boina. Vokany, tovovavy iray, 20 taona namoy ny ainy raha roa hafa kosa naratra mafy. Potipotika tsy nisy noraisina intsony ilay fiara nandehanan’izy telo vavy. Araka ny fampitam-baovao voaray avy any an-toerana, vokatry ny fandehanana mafy teo amin’ilay fiara no nahatonga ny loza satria mbola nijanona teo amin’ny 100 km/h ny fanjaitra manondro ny hafainganam-pandehan’ilay fiara. Tamin’ny fanadihadiana nataon’ny polisy no nahafantarana fa nahenoana fofon-toaka ny mpamilin’ilay fiara. Telo vavy no tao anaty fiara niaraka tamin’ny mpamily. Ny fiara efa nidona mafy teo amin’ilay andrin-jiro no nahataitra ireo mponina tao Antaimby. Folaka noho ny dona nataon’ilay fiara ilay andrin-jiro “beton”-n’ny Jirama. Maty tsy tra-drano teo no ho eo ny tovovavy iray. Tapaka kosa ny tongotr’izy roa vavy namany. Naratra mafy koa ny mpamily satria nifanandrify tao amin’ny faritra misy ny mpamily ilay andrin-jiro nianjera. Niteraka fahasahiranana teo amin’ireo mponina teo amin’ny manodidina ny famoahana ny razana noho ny havesatr’ilay andrin-jiro nianjera teo ambony fiara. Tery tao anaty korontambin’ny fiara koa ireo niharam-boina ka isan’ny nampanano sarotra ny famonjena izany. Naharitra ora maromaro ny fisokirana ny fatin’ilay tovovavy sy ireo naratra. Voatery nopotehina tsikelikely ireo korontambin’ny fiara tamin’ny fisokirana azy ireo.
Atahorana ny ain’ireo naratra…
Niteraka fahasahiranana ho an’ireo mpampiasa lalana tao an-tampon-tanànan’i Sambava ity lozam-piarakodia ity satria nitsivalana teo amin’ny arabe ilay andrin-jiro tapaka. Nentina haingana namonjy hopitaly ireo naratra, saingy atahorana ny ain’izy ireo noho ny fahaverezan-dra be loatra. Voalazan’ireo mponina ao Sambava fa matetika itrangana lozam-piarakodia hatrany eo an-tampon-tanànan’i Sambava. Olana ho an’ny ao Sambava rahateo koa, gaboraraka tanteraka ny fifamoivoizana. Samy manao izay tiany hatao ny mpamily ary tsy manaja intsony lalàna mifehy ny fifamoivoizana.
Fa olona iray koa namoy ny ainy vokatry ny fivadibadihan’ny taksiborosy iray tapaka frein tao Manjakavarandrano, RN 4, afakomaly tolakandro tao Manjakavarandrano eo anelanelan’i Mahatsinjo sy Andriba. Taksiborosy iray avy aty an-drenivohitra hihazo an’i Mahajanga ity niharan-doza ity. Mpandeha maromaro indray naratra mafy taorian’ny fivadihan’ny fiara. Nentina haingana ao amin’ny CSB II Andriba ireo naratra. Namoy ny ainy raha vantany vao tonga teny amin’ny hopitaly kosa ny mpandeha iray.
Tsy misy afa-tsy ny fitandremana ihany satria tampoka ny fiavian’ny loza. Tonga hojeren’ny mpamily tsara ihany koa mialoha ny hiaingana ireny fiara taksiborosy ireny mba hialana amin’ny loza tampoka toy izao.